स्टीयर मेस्टो, स्टार मेरिस्टो - प्राग
युरोप चेक गणतन्त्र प्राग
क्षेत्र: 1.29वर्ग मीटर। किमी
प्राग को व्यापार कार्ड स्टार मेरिस्टो वा ओल्ड टाउन हो। यो चेक रिपब्लिकको ऐतिहासिक जिल्ला हो, जुन किंवदंतियों मा लिखित छ र आफैं को पुरातन आकर्षण को अद्वितीय आकर्षण छ। यो सबै दर्शनीय स्थलों भ्रमण को एक भाग हो, र यहाँ स्थित ठाँउहरु एक राष्ट्रीय खजाना हो।
के लागि प्रसिद्ध क्षेत्र के हो?
ओल्ड टाउन वाल्ट्व नदीको दायाँ किनारामा रहेको छ, र ओल्ड टाउन स्क्वायर यसको केन्द्र मानिन्छ। धेरै शताब्दीका लागि यो प्राग बढेको र विकसित भयो। यस दिनको बिरुद्ध धेरै भवनहरू महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रमका साक्षी हुन्।
जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1.29वर्ग मीटर छ। किलोमिटर, र स्थानीय बासिन्दाहरूको संख्या 10,256 व्यक्ति हो। प्रत्येक सडक कलाको स्मारकहरूको वास्तविक ग्यालरी हो। भवनहरु विभिन्न ईरे मा बनाइयो र विभिन्न प्रकार को शैलियां बनाइयो: गोथुन, रेनेस्सान्स र बरको।
पुरानो टाउन यात्रीहरूको लागि शहरको सबैभन्दा रोचक भाग मानिन्छ। पर्यटक मार्गहरू आर्केड, मध्ययुगीन चर्च र भित्ताहरू, लुटेका घरहरू र सानो पसलहरूसँग संकीर्ण सडक र आंगनहरूमा पार गर्छन्। हाल, यो क्षेत्रमा यसको चौंरीको प्राचीन सेलारहरू, सेप्लेसहरू र भूमिगत लेबिरिंथहरू छान्छन्।
पुरानो शहरको इतिहास
पहिलो सम्झौता यहाँ 10 औं शताब्दीको मध्यमा देखा पर्यो, र पालिसिस्लाइडको जीनले उनलाई नेतृत्व गर्यो। एक शताब्दी पछि, सक्रिय व्यापार पहिले नै शहरमा भएको थियो। 1158 मा युदितिन सबैभन्दा (यूरोपमा दोस्रो) यहाँ बनाइयो, जसमा मल्ल-स्ट्रान्ना र स्टेयर मेस्टो जोडिएको थियो।
18 औं शताब्दीमा यूसुफ द्वितीय शक्तिमा आए, जसले विभिन्न सुधारहरू गरे। उनले लगभग पूर्णतया सम्झौताको अनुहार परिवर्तन गरे र प्रागको छिमेकी शहर एकताबद्ध गरे। राजाले सडकमा डिजाइन गरे, एक मजिस्ट्रेट नियुक्त गरे र यसलाई पुरानो टाउन हॉलमा पठाइयो ।
केस्ता मेनेडोको क्षेत्रमा कुन स्थानहरू छन्?
पर्यटकहरू बीचको सबैभन्दा ठूलो चासो यस्तो कारणले गर्दा:
सार्वजनिक सभा - यो कला नोवो शैलीमा XX शताब्दीको सुरुमा निर्माण गरिएको थियो। भवन को मुखौटा मोजाइक्सी र प्राग को कोट को कोट संग सजाया गएको छ। यहाँ 1918 मा चेकोस्लोवाकियाको स्वतन्त्रता घोषणा गरिएको थियो।
पाउडर गेट्स - XV-XVI शताब्दीमा निर्मित टावरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। XVIII शताब्दीमा बन्दुकको साथ एक भण्डार थियो, जहाँ नाम आयो। यसैले प्रसिद्ध रयल रोड सुरु भयो।
टिन को सामने मा वर्जिन मैरी को चर्च - यो गोथिक शैली मा बनाइन्छ र ओल्ड टाउन स्क्वायर मा स्थित छ। चर्चमा2939 -1111 मा बनाइएको छ। चर्च को आंतरिक XVIII शताब्दी मा अदालत चित्रकला शर्करा द्वारा निष्पादित चित्रहरु संग सजाया गएको छ।
जनवरी हरि स्मारक आधुनिक चेकियाको स्वतन्त्रता को प्रतीक मानिन्छ। तिनी प्रसिद्ध प्रचारकको मृत्युको 500 औं वर्षगांठमा स्थापना गरिएको थियो।
चर्च को सेन्ट जेम्स - यो 1232 मा पहिलो वेट्सस्ला को क्रम मा राखिएको थियो। मन्दिर भित्रको देशमा सबैभन्दा ठूलो अंग, 21 वेदीहरू, पुरातन सरकोफगी र प्रतीकहरू छन्।
चार्ल्स ब्रिज - प्रागको सबैभन्दा प्रसिद्ध भवन हो, यो 30 मूर्तिहरू स्थापित गरिएको थियो। पुल XIV शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो।
सेन्ट निकोलस (Mikulas) को कैथेड्रल - प्राग मा स्टेर मेस्टो को टाउन हॉल को नजिकै स्थित छ। यो एक ओर्थोडक्स चर्च हो, जुन पुरानो दिनमा रूसी चर्चले चलाएको थियो। यहाँ क्रिस्टल चकलेट छ, जो रूसको शाही क्राउनको रूप हो।
टाउन हॉल - जिल्लाको मुख्य भवनलाई मानिन्छ। यो अवलोकन डेक र प्रसिद्ध खगोलीय घडी Orloj संग सुसज्जित छ। हरेक घण्टा उनीहरूको खुसी रिंगाबाट सुनेका छन्, र घडी विन्डोको माथिल्लो भागमा खोलिएको छ, जसमा 12 प्रेरितहरू देखा पर्छन्।
ओल्ड टाउन टावर युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर छ। यो राजा र संतहरूको राहत मूर्तिकला संग सजाएको छ। अनुहार मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ जसले दुष्ट आत्माहरूलाई टाढा पार्छ।
Rudolfinum - हाउस ऑफ आर्ट, एक कृत्रिम, एक संगीत कार्यक्रम र एक कला गैलरी। निर्माण XIX सदीमा निर्माण गरिएको थियो।
ऐतिहासिक इमारतों को अतिरिक्त, वहाँ संग्रहालयों , थिएटरहरु , मठ परिसरहरु र यहां सम्म कि स्टीयर मेस्टो मा पहिलो प्राग विश्वविद्यालय को निर्माण। त्यहाँ स्वेच्छा र ब्रान्ड पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र सडकहरूमा पबहरू छन्।
त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
तपाईं त्यहाँ ट्राम संख्याहरू 5, 12, 17, 20, 20 ले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रोकिएको छ Můstek, Čechův सबै भन्दा धेरै र Malostranská। तिनीहरूबाट तपाईलाई 10 मिनेटको लागि जानु आवश्यक छ। साथै भीरे मेस्टोमा त्यस्ता सडकहरू छन्: विक्लावस्के नाम।, इटलस्का, Žitná, विल्सनवा र नार्बेजजी Edvarda Beneše।
गणतन्त्र स्क्वायर (प्राग)
पाउडर टवर (प्राग)
विवाहलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ?
स्ट्रबेरी - रोपण र हेरविचार
18 उदाहरण मीठा बदला को अवधारणा को व्याख्या
ग्रीन गलैँचा - कसरी सफलतापूर्वक गठबन्धनमा गठबन्धन?
Myopia को प्रोफालोक्सिस
जस्टिन Bieber र हेल बाल्डविन
क्लोरोफिलिडी स्प्रे गर्नुहोस्
महिलालाई कस्तो हुनुपर्छ?
महिलाको सालगिरहको लागि मजेदार उपहारहरू
एक वृश्चिक मानिसले कसरी प्रेम गर्छ?
बच्चा बिग्रियो र उनको टाउकोमा हिड्यो
सुन मूर्तिकला केट मोस सोथबी को नीलामी गरिनेछ
धातु स्विङ गेट्स
बे सञ्झ्यालको पर्दा
मासु र कचौराहरू संग सलाद
शरद ऋतु पछि चक्र पुनर्स्थापना - प्रजनन प्रकार्य को सामान्यकरण को सबै विशेषताहरु
तपाईलाई वजन कम गर्न के चाहिन्छ?
कुन किसिमको पार्क पार्कमा लगाउन सकिन्छ?
फुटबल मैदानमा फोटो खिच्न